Ithegi: klout | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 3, 2014 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Siye sabhala ngaphambili malunga nemigibe yentengiso yempembelelo. Njengomntu ohlawulwa amaxesha ngamaxesha njengempembelelo, andithandabuzi ukuba zingaphi iimpembelelo kubudlelwane bokuthengisa obusetiweyo. Kwimeko apho, ebutsheni balo nyaka ndiye ndamenywa kwiBrickyard kuba ndiyimpembelelo yendawo kwimidiya yoluntu. Kwakukho iqela labantu ababemenyiwe kwimidiya yoluntu-bonke benamanqaku aphezulu kwinjineli eyaziwayo yokufumana amanqaku e-Indianapolis. Inkqubo ye-
I-HeatSync ibonelela ngeendlela zokuqokelela idatha engafaniyo ye-analytics kwimithombo eliqela edityanisiweyo, ukuhlela idatha, ukuyigcina, kunye nokuyivelisa ngendlela enikezela ukuqonda okuphucukileyo kukuhamba kunye nokusebenza kwewebhusayithi. I-HeatSync itsala idatha kwi-Alexa, efanayoWeb, uKhuphiswano, uGoogle Analytics, uFacebook, uTwitter, uKlout, uMOZ, uCrunchBase kunye neWOT ukugqibezela iprofayile, ixesha kunye nenjini yokuthelekisa indawo yakho. Iprofayile yeWebhusayithi- IProfayile yeWebhu yeSyncSync inikezela ngombono onzulu kwiinkalo zonke
25 Izixhobo zoLuntu zezoLuntu eziMangalisayo
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amaqonga eendaba ezentlalo ahluke kakhulu kwiinjongo zawo kunye neempawu. Le infographic evela kwiNgqungquthela yeQhinga leSiseko sezeNtlalontle ye2013 yehla iindidi kakuhle. Xa ucwangcisa isicwangciso senkampani sentlalontle, inani elikhulu lezixhobo ezikhoyo kulawulo lweendaba zosasazo zinokuba nzima. Siqulunqe izixhobo ezikhulu ezingama-25 zokuba wena neqela lakho niqale, zihlelwe ngokweendidi ezi-5 zezixhobo: Ukuphulaphula ekuhlaleni, Incoko yoLuntu, ukuThengiswa kweNtlalontle, uhlalutyo loluntu
I-AddShoppers: Iplatifomu yoRhwebo loLuntu
NgoLwesibini, Septemba 24, 2013 NgoLwesibini, Septemba 24, 2013 Douglas Karr
Iiapps ze-AddShoppers zikunceda ukonyusa ingeniso yentlalontle, ukongeza amaqhosha okwabelana kunye nokubonelela ngohlalutyo malunga nendlela intlalontle enefuthe ngayo kwezorhwebo. I-AddShoppers inceda ababoneleli nge-ecommerce ukuba baxhase imithombo yeendaba zentlalo ukwenza ukuthengisa ngakumbi. Amaqhosha abo okwabelana, imivuzo yentlalontle, kunye neapps zokwabelana ngokuthenga zikunceda ufumane ezinye izabelo zentlalo ezinokuthi emva koko zijike zibe yintengiso yentlalo. I-AddShoppers analytics ikunceda ulandele imbuyekezo yakho kutyalo-mali kwaye uqonde ukuba leliphi ijelo loluntu eliguqukayo. IAddShoppers yonyusa ukubandakanyeka kwabathengi ngokudibanisa
NgoMvulo, Agasti 20, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ndakhe ndeva malunga neKlout kwithuba elidlulileyo kodwa khange ndihoye kakhulu ndade ndadibana neqela leKlout eLas Vegas. Ndivavanye kwaye ndafumanisa ukuba amanye amanqaku ebengenanto. Umzekelo, uninzi lwethu lwalunamaphepha amaninzi, iiakhawunti ezininzi, kunye nembali ekwi-intanethi eyadlula iminyaka elishumi… kodwa iKlout ayichaphazelekanga yiyo yonke loo nto. Ixesha lokugqibela uKlout ehlaziya inqaku, bandilahlile ngokupheleleyo. Inkqubo ye-
Isebenza njani iKlout?
NgoLwesine, Julayi 5, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Amanani abalulekile xa kufikwa kwintengiso ekwi-Intanethi. Ndiye ndagxeka iKlout kodwa ndisathanda ukuba iinkampani zizama ukuphuhlisa iimetrikhi ezilula ukumisela iindawo kunye nabantu abanefuthe kwi-Intanethi. Andizenzi ngathi ndiliqonda kakhulu inqaku leKlout, kwaye andikhathazeki ngalo kakhulu. Kodwa… amaxesha ngamaxesha, ndiye ndingene kwinqanaba lam leKlout (usetyenziso lwe-Klout iPhone masikubonise!). Ukuba ungathanda
Yintoni iprojekti yakho?
NgeCawa, uDisemba 18, 2011 Douglas Karr
Ininzi intshukumo eyenzekayo ngoku kushishino lokufumana amanqaku. Ndicinga ukuba uKlout ufumene ukugxekwa kutsha nje… kunzima ukuba ngumfo wokuqala kwibhloko nakweyiphi na intsimi. Ndiyabulela ukuba umntu othile uthathe umsebenzi onzima wokuphucula amanqaku egunya lokuqala kwishishini, nangona kunjalo, kwaye ndiyathemba ukuba bayakwazi ukulungelelanisa ii-algorithms zabo kwaye baqhubeke nokuziphuhlisa. Omnye wabakhuphisana nam ndibabona benyuka
NgoLwesithathu, Aprili 21, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Douglas Karr
Ukuqwalaselwa ngabathengisi beendaba zosasazo: inani labalandeli ayisosalathiso esomeleleyo sempembelelo. Ngokuqinisekileyo… icacile kwaye kulula - kodwa iyonqena. Inani labalandeli okanye abalandeli bahlala bengenanto yakwenza nomntu okanye amandla enkampani okuphembelela abanye. Iimpawu ezisixhenxe zeMpembelelo kwi-Intanethi Umphembeleli kufuneka abandakanyeke kwincoko ezifanelekileyo. Umlingisi onabalandeli be-bajillion ngekhe athethe ukuba banokuba nefuthe kwabanye malunga nemveliso yakho